RFID အနုပညာစက္ကူကဒ်, coated စက္ကူပစ္စည်း Card ကို, RFID Coated Paper Card, RFID Paper Card
အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်း Card ကို coated စက္ကူပစ္စည်း Card ကို, RFID အနုပညာစက္ကူကဒ်, RFID Coated Paper Card, RFID Paper Card
ပရိုတိုကောစံချိန်စံညွှန်းများ: ISO ကို 14443 TypeA / B,, ISO ကို 15693, ISO / IEC 18000-6B / 6C
chip အမျိုးအစား: Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, Mifareultralight10, MifareultralightC, ငါကုတ် SLI ကို / SLI ကို-S က / SLI ကို-L / SLIX, MifareDesfire2K / 4k / 8K, MFlPLUS2K / 4K, Ti2048, EM4200, EM4305, EM4450, EM4102, TK4100, T5577, CET5500, Hitagl, Hitag2, Hitags, FMl208(စီပီယူ), ဂြိုလ်သား h3, Impinj M5, etc.
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: LF / HF 2.5 ~ 10cm
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF 1 ~ 10 သိန်းကျော်ရရှိထားပါသည်(အသုံးပြုမှုနိုင်ငံအတွင်းရှိ RF စည်းမျဉ်းပေါ်တွင်မူတည်သည်, စာဖတ်သူကိုအင်တင်နာ configuration များ, နှင့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ။)
Operating အပူချိန်: -20℃ ~ + 85 ℃
ပစ္စည်း: အနုပညာစက္ကူ (coated စက္ကူ)
ရှုထောင့်: က ISO စံကဒ် 85,6 × 54 × 0.80mm သို့မဟုတ်အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ်, ပုံသဏ္ဌာန်
သင်ထောက်ကူပစ္စည်းများ: ခြစ်ရာမပေါ်လူမီနီယံအင်းလေးသို့မဟုတ် 0.13mm ကြေးနီဝါယာကြိုး
encapsulated ဖြစ်စဉ်ကို: ultrasonic အော်တိုစက်ရုံလိုင်းများ / အလိုအလျောက်ဂဟေဆော်ခြင်း
Paper cards can be used imported coated paper, 250ဆ, 300ဆ, 350ဆ, 400ဆ, 450g and other thickness. With low cost, confidentiality, environmental protection and energy saving. Card with double-sided coated paper, printing gloss as high as 95%, card body is positive, the back of the varnish or coating process to protect the printing surface graphic.
Identification card, တဦးတည်းကတ် Solutions, enterprise/campus card, ဘတ်စ်ကားကဒ်, highway fees, ကားရပ်ခြံ, ransportation, community management, Gas stations, securities, telecom, medicine, tinsurance,စသည်တို့ကို.
လုံခြုံရေး features တွေကို: လေဆာ ablation, hologram / OVD, ခရမ်းလွန်မင်, optical Variable မှင်, hidden ဘားကုဒ်ကို / ဘားကုဒ်မျက်နှာဖုံး, grade သက်တံ့ရောင်, micro-စာသားကို.
အခြားသူများက: chip ဒေတာစတင်ခြင်း / စာဝှက်စနစ်, programed ကိုယ်ပိုင်သံလိုက်အစင်း, လက်မှတ panel က, ဘားကုဒ်, အမှတ်စဉ်နံပါတ်, ဖောင်းကြွ, Die-cut.
I am interested in your product RFID Art Paper Card, coated စက္ကူပစ္စည်း Card ကို
prev: သတ္တုပစ္စည်း Card ကို, သတ္တုဗုဒ္ဓ Card ကို, သံလိုက် Stripe ဟာသတ္တု Card ကို
နောက်တစ်ခု: RFID Wood ကကဒ်, ဝါးပစ္စည်း Card ကို, သံလိုက် Stripe ဟာ Wood ကကဒ်